Maxaa Iska Badalaya Heshiiskii Somaliland & Khaatumo? – Allsomali.net
[ 21 November 2020 ] Somaliland Oo Xaflad Ku Furtay Diwaangelinta Cod-bixiyeyaasha Doorashooyinka Soo Socda.	Somaliland
HomeSomalilandMaxaa Iska Badalaya Heshiiskii Somaliland & Khaatumo?
9 October 2020 allsomali Somaliland, Wararkii Ugu Dambeeyay 0
Waxaa jiray heshiis ay gaadheen xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo maamulkii Khaatumo ee uu madaxda ka ahaa Allah ha u naxariistee Cali Khaliif Galayr, oo shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya.
Madaxweynahii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Madaxweynahii maamulka khaatumo Dr Cali Khaliif Galleydh ayaa 20 bishii October 2017 magaalada caynabo ku kala saxiixday heshiis kadib wadahadalo u soacday muddo kana dhacay wadamo iyo magaalooyin kala duwan.
Labada dhinac ayaa wakhtigaas kala saxiixday heshiisyo ay ka mid yihiin:
In la helo caddaalad, sinaan iyo nabad ku wada noolaansho.
In khilaaf kasta oo jira lagu dhammeeyo wada hadal iyo jid nabadeed.
In dastuurka dib loo furo, si loo sugo awood qeybsi ku dhisan caddaalada iyo Sinnaan, guddi joogto ahna arrintaasi loo saaro.
In Somaliland, ururada samafalka iyo hey’adaha jimciyada quruumaha ka dhaxeysa ay ka hawl galaan sidii mashaariic horumarineed looga fulin lahaa gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle iyo In ciidamada hubeysan ee Khaatumo la qarameeyo, oo Somaliland ay yeelato ciidan qaran oo suga xuduudaha, jiritaanka iyo danaha Somaliland.
Halkee ayuu ku danbayn karaa heshiiskaasi?
Tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweyne Siilaanyo, oo xilliga uu heshiiskaasi la galay ay u hadhsanaayeen wax ka yar laba bilood muddo xileedkiisa ayaa la filayey in xukuumadda beddeli doonta ay halkaas kasii ambaqaadi doonto.
Inkasta oo ay jireen kulammo ka danbeeyey oo ay wada yeesheen madaxweynaha hadda ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, weli kama ay soo bixin natiijo la taaban karo, iyadoo xilligii la galay heshiiskaas ay ka soo wareegtay muddo ku dhaw saddex sano.
Cali Khaliif ayaa muddooyinkii u danbeeyey Hargeysa ku sugnaa waxaana la rumaysan yahay inay ahayd sababtii ugu weynayd ee u joogay hirgelinta heshiiskaas ay ku wada jireen Somaliland.
Heshiiskaasi raggii ay ka wada shaqeeyeen ee muddooyinkii dambena ay aadka isugu dhawaayeen waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga UCID ee mucaaradka ah, Eng Faysal Cali Waraabe, oo aanu weydiinnay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka, heshiiskii labada dhinac dhex maray, iyo waxa laga qabtay dhaliilo uu marxuumka qudhiisu mararka qaarkood farta ku fiiqay oo uu sheegay in ay leedahay xukuumadda Somaliland.
“Heshiiska waxa uu la galay xukuumaddii Siilaanyo oo ka soo jeeda xisbiga Kulmiye aniyo xisbiyada kalena waan la wadaagnay oo waa ku raacsanayn, markii danbena dawladdii uu dhisay madaxweyne Muuse guddidii Khaatumo waxaa ku jirey illaa afar wasiir oo wasiirka dastuurku ka mid yahay, laakiin meel kastaba si xun u sheeg lagama waayo laakiin waxaan wadnaba meel fiican bay hadda maraysay oo uu isniinta soo noqdo ayay ahayd oo heshiiska la dhammaystiro” ayuu yidhi Faysal
Weriyaha BBC-da ee Axmed Nagaashe ayaa isla sida oo kale Faysal weydiiyey, haddiiba uu dhintay Cali Khaliif, mustaqbalka heshiiskii sida uu noqon doono. Faysal ayaa se ku adkaystay in uu sii socon doono oo la dhmmaystiri doono.
“Cali hadduu geeriyooday heshiiskii waa nool yahay annaguna waan nool nahay, insha Allah waa la dhammaystiri doonaa. Cali wuxuu doonayey in waddanka aan la kala sarrayn oo caddaalad la gaadho oo la fidiyo maamulka, wuxuu odhan jirey Yoocada, Insha Allah Yoocadiina waan gaadhi doonnaa” ayuu ku jawaabay Guddoomiye Faysal Cali Waraabe
Qodobabda heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in dib loo furo dastuurka, waxaana uu Faysal sheegay in arrintaas ay samayn doonaan oo la sugayaan baarlamaanka cusub ee iman doona doorashada la filayo in ay dhawaan ka dhacdo Somaliland.
Somaliland Oo War-Murtiyeed Ka Soo Saartay Doorashooyinka Golaha Baarlamaanka Matalaya Somaliland Ee Jooga Ee Somaliya
Tartanka Gobolada: Somaliland Oo Ganaaxyo Culus Dusha Ka Saartay Xiddigaha, Tababarayaasha & Masuuliyiinta Xulka Gobolka Hawd Kadib Qalalaasihii Shalay.